तिथि मेरो पत्रु » एक नाश छ? यहाँ कसरी थाहा छ
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जुन. 02 2020 |2मिनेट पढ्न
हामी सबै यो अनुभव गरेका छन्, आफ्नो पेट मा पुतलीहरु जब तपाईं कोठा मार्फत तिनलाई हेर्न; सास को shortness तपाईं आफ्नो दबाउन विगतमा माझ वा एलिभेटर मा तिनलाई नजिक खडा गर्दा; यो हृदय दर गर्दा आफ्नो काखमा चलचित्र थिएटर मा प्रत्येक अन्य विरुद्ध भर पर्नुको. यी तपाईं कसैलाई झर्ने छन् कि सबै संकेतहरु. बुझेर यो सजिलो छ, तर दिँदै कसैले तपाईँको भावना थाहा अधिक जटिल छ. यहाँ आफ्नो दबाउन सङ्केत गर्न मित्रता परे भावना विकास र तिनीहरूले नै महसुस यदि पत्ता लगाउन छन् भनेर केही तरिकाहरू छन्.
यो इमानदार दृष्टिकोण
सबैभन्दा सजिलो तरिका गहिरो सास उहाँलाई वा सीधा उनको लिन र गर्न सिमी फैल छ. तपाईँ एक्लै आफ्नो दबाउन प्राप्त गर्न सक्छन् र आफ्नो साँचो भावना तिनलाई बताउन कहाँ र तिनीहरूले नै महसुस यदि सोध्न एक समय सेट. तपाईं यो सबै तत्काल तिरस्कार लागि आफैलाई स्थापना लाइनमा बाहिर बिछाउने र संभवतः गरिनेछ, तर यो आफ्नो छाती बन्द यो सबै प्राप्त गर्न तेज तरिका हो. यो विधि आत्म-सम्मान को एक ठूलो रकम लिन्छ, तथापि. तपाईं आत्म-विश्वास सुपर हिरो छैनन् भने, सायद थप सूक्ष्म दृष्टिकोण राम्रो हुनेछ.
को इश्कबाज कारक वृद्धि
एक मित्र भन्दा बढी बन्ने मित्र को संभावना बाहिर महसुस गर्न राम्रो तरिका बिस्तारै आफ्नो स्नेह को वस्तु flirtier बन्न छ. धेरै हँसिलो, आँखा सम्पर्क धेरै बनाउने, एक नियमित झट्ट र द्रुत, निजी एक सामाजिक सेटिंग मा जब आफ्नो दबाउन अरूको भन्दा तिनीहरूलाई बढी ध्यान दिइरहेका छन् भनेर सूक्ष्म संकेत दिन सक्छ हालन. तपाईं अन्य मान्छे भन्दा आफ्नो दबाउन विशेष ध्यान भने यो तपाईं तिनलाई लागि विशेष भावना छ भनेर आफ्नो दबाउन देखाउँछ.
बाहिर पुग्न र आफ्नो दबाउन स्पर्श गर्न सक्छन् कुनै पनि मौका. के छैन, म आफ्नो ठाउँ अतिक्रमण र तिनीहरूलाई असहज महसुस बनाउन अर्थ donít. तपाईं कुराकानीमा संलग्न रूपमा आफ्नो हात वा हात स्पर्श गर्न सरल ले अवसर. अलविदा भन्दै वा प्रत्येक अन्य अभिवादन गर्दा आफ्नो दबाउन अंगालो दिन. तिनीहरूले तपाईं एक कहानी वा गोप्य कुरा बताइरहेका छन् जब जब तिनीहरूलाई ठट्टा एक flirty तरिकामा तिनीहरूलाई नज र नजिक मा दुबला. वृद्धि physicial सम्पर्क तपाईं तिनलाई नजिक हुन चाहनुहुन्छ कि आशय ड्रप राम्रो तरिका हो, बुद्धिमानी दुवै सम्बन्ध, र शारीरिक.
तपाईंको Compliments संग धेरै हुन
तिनीहरूले एक सैलुन प्राप्त गर्दा आफ्नो दबाउन complimenting सुरु वा राम्रो outfit लगाउने. यो मात्र होइन आफ्नो दबाउन आफूलाई बारेमा राम्रो महसुस गर्नेछ, तर पनि उनलाई उनीहरूले आकर्षक छन् लाग्छ थाहा हुनेछ. आफ्नो दबाउन एक मजाक बनाउँछ वा ìyou त smarti साँच्चै जस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा आफ्नो दबाउन दिनु राम्रो तरिका हो छलफल गर्दा हो थाहा हुँदा जस्तै ìyou बनाउने टिप्पणी humorî यस्तो ठूलो अर्थमा छ.
कुनै चाल foolproof छ, र यो अझै पनि तपाईं फ्लैट तपाईंको दबाउन आफ्नो भावना बताउन तिनीहरूले सङ्केत प्राप्त donít यदि आवश्यक हुन सक्छ, तर तिनीहरूले तपाईं आफ्नो दबाउन तपाईं बारेमा महसुस कसरी राम्रो अनुभव प्राप्त मदत गर्न सक्छ. यी कर्तुतहरू कुनै पनि साथ, यसलाई आफ्नो crushís प्रतिक्रियाहरू पढ्न महत्त्वपूर्ण छ. तिनीहरूले प्राप्त लज्जित वा नाराज गरेर आफ्नो टिप्पणी वा कार्यहरू प्रतिक्रिया भने, संभावना तिनीहरूले तपाईंलाई बारेमा नै महसुस donít छन्. तिनीहरूले थप प्रेमलीला संग प्रेमलीला प्रतिक्रिया भने, तिनीहरूले पनि तपाईं क्रशिंग छन् राम्रो साइन छ.
खाद्य हरेक विद्यार्थी सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ?